Roberto Firmino Oo Shandaddiisa Ka Xidh-xidhanaya Liverpool Iyo Jurgen Klopp Oo £50 Milyan Oo Gini Dul-dhigay Camavinga - GOOL24.NET
Roberto Firmino Oo Shandaddiisa Ka Xidh-xidhanaya Liverpool Iyo Jurgen Klopp Oo £50 Milyan Oo Gini Dul-dhigay Camavinga
Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa lagu soo warramayaa inuu ka tegayo xiddiga reer Brazil ee Roberto Firmino oo xilli ciyaareedkan la dhibaatoonaya dhaawacyo iyo boos la’aan.
Firmino ayaa waxa booskiisa kala wareegay Diogo Jota oo inta badan u dhexeeya Mohamed Salah iyo Sadio Mane kaas oo dhinaca dhamaystirka kubbadaha kaga fiicnaaday laacibka reer Brazil, hase yeeshee hal-abuurkii iyo kubbad-qaybintii uu samaynayay Firmino ayaa iyadana laga dareemayaa Anfield.
Tababaraha reer Germany ee Jurgen Klopp ayaa xaqiiqsaday inay ku adkaan doonto inuu sii haysto firmino maadaama uu lumiyey booskiisii joogtada ah, waxaana uu isku diyaarinayaa nolol uu ka maqan yahay Firmino oo xilli ciyaareedyada soo socda ah.
Sida uu qoray wargeyska Liverpool Echo ee kasoo baxa magaalada Liverpool, Reds ayaan kalsooni badan ku qabin in uu Firmino sii joogi doono iyadoo uu heshiiskiisuna ku egyahay dhamaadka xilli ciyaareedka dambe.
Xagaaga soo socda waxay Liverpool kala dooran doontaa inay kusii dhegsanaato Firmino oo uu sannad kali ahi heshiiskiisa ka hadhsanaanayo iyo inay iibiso, sababtoo ah, waxa uu laacibkani kaga bixi karaa si xor ah haddii inta ka horreysa aanay ku qancin inuu heshiiska kordhiyo, taas oo dariiqa loo marayo ay noqonayso in booskiisii joogtada ahaa loosoo celiyo.
30 jirkan ayay wararku sheegayaan in Liverpool ay u badan tahay inay iibiso ka hor inta aan la gaadhin waqtiga uu sida xorta ah uga tegayo.
Wargeysku waxa uu intaa ku daray, in Liverpool ay £50 milyan oo Gini dul-dhigtay laacibka da’da yar ee reer France ee Eduardo Camavinga oo Real Madrid ay xagaagii kasoo iibsatay Rennes, isla markaana beddel suge aan boos joogto ah haysanin ka ah safka tababare Carlo Ancelotti.